शासकले कर्तव्य र जनताले अधिकार भुले गणतन्त्र टिक्दैन - हिमाल दैनिक
शासकले कर्तव्य र जनताले अधिकार भुले गणतन्त्र टिक्दैन
१६ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १७:५४
कतिपय शब्द पर्यायवाची हुन्छन्। कुनै समय सोसियल डेमोक्रेसी, साम्यवाद र समाजवाद प्रजातन्त्रवादी शब्द थिए।
आजसम्म पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र जनतन्त्र पर्यायवाची शब्द छन्। यो कुरा कुनै पनि व्याकरणशास्त्रीले भन्न सक्छन् तर, राजनीतिमा तीनै शब्दको पृथक अर्थ हुँदोरहेछ।
यही पृथक अर्थकै कारण त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो पार्टीको नाम सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी नै भनिरहेका लेनिनले पनि १९१७ मा आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिष्ट राखेका थिए। कार्लमार्क्सका समयमा कम्युनिष्ट शब्द र सोसियल शब्द अलग अलग थिएन। कम्युनिष्ट भनेको क्रान्तिकारी कुरा हो। क्रान्तिकारी हुन अब यसको नाम हामी कम्युनिष्ट राखौं भनि आफ्नो घोषणापत्रको नाम कार्लमार्क्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र भनेका थिए।
अहिले पनि गणतन्त्र भन्नासाथ हामीले कता कता यो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र त होइन, यो थप व्यवस्था पो हो कि भन्ने कुरा गर्छौं। हुन पनि गणतन्त्रसँग नेपालीले धेरै नै आशा राखेका थिए।
अब नेपालमा साँचो अर्थमा जनताको शासन आयो भन्ने ठानेका थिए। तर, गणतन्त्रात्मक संविधान आएको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि गणतन्त्र आएको अनुभूति भने जनताले गरिरहेका छैनन्। उल्टै जे भएको छ त्यसले हिँजोसम्म भएको वातावरण पनि समाप्त भएको छ।
त्यस अवस्थामा वास्तविक गणतन्त्र कसरी आउँछ? अथवा भनौं हामीले भन्दै आएको पूर्ण लोकतन्त्र के हो? हिमाल दैनिक डटकम स्थापनाको तेस्रो वर्षको अवसरमा यसबारे थोरबहुत विचार विमर्श गर्न आवश्यक भएको छ।
अहिलेको समाजवाद भन्नुहोस् वा गणतन्त्र भन्नुहोस्, प्रजातन्त्र भन्नुहोस् अथवा लोकतन्त्र भन्नुहोस् यसमा एउटा कुरा प्रष्ट हुनु परेको छ- कि, प्रजातन्त्र भनेको कुनै कालिगढले बनाएको मूर्ति वा देखिने हात्तीको जस्तो चार खुट्टा वा दुई तिरको पुच्छर होइन। यो मुख्यतयः मानव मात्रको आपसी सम्बन्धबिचमा आएको गुणात्मक विकल्प हो।
प्रजातन्त्र भनेको एउटा शासक हटेर अर्को शासक आउने होइन। गणतन्त्र भनेको सूर्यबहादुर थापाका ठाउँमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुने होइन। अथवा गिरिजाको ठाउँमा मनमोहन अधिकारी अथवा शेरबहादुर देउवाको ठाउँमा केपी शर्मा ओली हुने मात्र होइन।
त्यो त हो, एउटा शासक अवश्य चाहिन्छ, एउटा प्रधानमन्त्री देशमा चाहिन्छ। राज्य भएपछि कोही न कोही राज्यको प्रमुख कार्यकारी हुने नै भयो। मुख्यतयाः गणतन्त्र भनेको अबदेखि यस मुलुकमा शासक र शासितका बिचमा हिजोको जस्तो भेदभाव रहेन है भन्ने कुराको सूचना हो।
कुनै बेला राजा थिए। उनको अगाडि/ पछाडि गाडी थिए। माथि साइरन, तल पनि साइरन थियो। त्यस दृष्टिकोणले नियाल्दा आजको राष्ट्रपतिको सवारी हेर्दा राष्ट्रपतिको सवारीले समाजमा खडा गरेको अवरोध हेर्दा प्रत्येक व्यक्तिले प्रश्न गर्न थालेको छ। कि, यही हो त गणतन्त्र? के यहि हो त लोकतन्त्र?
तर, प्रश्न एउटा छ कि, यस्तो अवस्था किन भइरहेको छ? र जनता पनि तिल्मिलाई रहेका छन्। यो एउटा यस्तो विषय हो जसलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न जरूरी छ। यदि समयमै यसको सम्बोधन गर्न सकेनौं भने तानाशाहीको भूतले फेरि हामीलाई पछ्याउन सक्नेछ।
हामीले परिवर्तन ल्याएका हौं। त्यो परिवर्तन ल्याएको भालिपल्ट हाम्रो दायित्व सकियो? सकिएको छैन। भनिन्छ, निरन्तरको हाम्रो सतर्कता नै लोकतन्त्रको मुख्य पहरेदार हो। अंग्रेजीमा भनिन्छ, Eternal vigilance is the price of liberty. सधैंको निगरानी नै स्वतन्त्रताको मूल्य हो।
त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं। अथवा जनता/प्रजाले गर्न सकिरहेका छैनन्। के त्यसो भए प्रजाको काँधमा चढेर अथवा जनताको बुई चढेर सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेता, सांसद जो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भए, मन्त्री बने उनीहरुको कुनै दायित्व छैन?
प्रत्येक जनप्रतिनिधिले संघीय संसदको सांदसदेखि तल्लो तहको वडा अध्यक्षलेसम्म र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले राज्यको वर्तमान चरित्रका बारेमा विचार गर्नुपरेको छ।
के राज्यको चरित्र फेरिएको छ? सरकारी पैसा जान्छ सडक बनाउनका लागि, सरकारी पैसा जान्छ खानेपानी, विजुलीको योजना सञ्चालनका लागि। हिजो त्यो पैसा खर्च गर्ने पद्धतिमा आज कुनै परिवर्तन भएको छ? जनताले आज पनि के हाम्रो देश भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छन्?
गणतन्त्र त्यतिबेला आउँछ, जुन दिन कसैले बोलाएर होइन, कसैले डाकेर होइन, कसैले योजना दिएर होइन, अहिले मजबुर भएर विदेशिएका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीले ए अब त हाम्रो शासन आएछ, जाउँ त्यही गएर लडेर लिउँ भनि फर्किएर आउँछन्। जुन दिन यस देशका प्रत्येक नागरिकलाई यस देशमा जन्मिएको प्रत्येक जीउँदो प्राणिलाई यो देश मेरो पनि हो है। यसका हरेक कुरामा मेरो पनि उत्तिकै हक लाग्छ भन्ने अनुभूति हुन्छ त्यो दिन वास्तविक लोकतन्त्र आउँछ।
त्यो अनुभूति आज जनतामा छैन। आज पनि ‘क्या रख्खाहै नेपालमे’ भन्दै भारत जानेहरुको लर्को छ। आज पनि मध्य एशियाको गर्मी खाएर दुई पैसा कमाएर भए पनि आफ्नो घरपरिवार चलाउन नेपाली बाध्य छन्।
आज पनि पुलिस उस्तै छ, प्रशासन उस्तै छ, न्याय सम्पादको तरिका उस्तै छ। भूमिसुधार र मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार उस्तै छ, भन्सार कार्यालयमा उस्तै छ भनेपछि के यी कुरालाई परिवर्तन गर्ने हाम्रो दायित्व होइन? शासक वर्गको दायित्व होइन? सांसदको दायित्व होइन? लोकतन्त्र भनेको उही एउटा सांसदको अनुहार होइन। लोकतन्त्र भनेको ‘क’ को ठाउँमा ‘ख’ संसदमा पुग्ने मात्र होइन। लोकतन्त्र भनेको ‘क’ को ठाउँमा ‘ख’ प्रधानमन्त्री हुने होइन।
लोकतन्त्र भनेको तल फेद वा मुलमा रहेका जनताले महसुस गर्ने ‘ए अब त पुलिस र सेना मसँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने भए। अब त बैंकमा जाँदा डराउनु पर्दैन, अब त मालपोत कार्यालय जाँदा मेरो काम पनि तुरुन्तै हुन्छ भन्ने अवस्थाको प्रत्याभूति गराउनु हो।’ यी कुनै संस्थामा के हामीले यो परिवर्तन ल्याउन सकेका छौं?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छातिमा हात राखेर जवाफ दिनुपरेको छ, मन्त्रीले, सांसदले दिनु परेको छ कि हामीले यो तीन वर्षमा जनतालाई के दियौं त? विगतका क्रियाकलाप भन्दा हाम्रो तौरतरिका केही फरक आएको छ?
यो मैले, तपाईंले जवाफ दिने कुरा होइन। यो प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर हेर्नु र जवाफ दिनु परेको छ। यसमाथि यतिले नपुगेर आम जनताकाबीचमा सञ्चारको प्रवाह पुर्‍याउने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन आँटेको छ।
यहाँ दुई तिरको कुरा छ। एकातिर जनताको उदासिनता, आन्दोलन गरिदियौं, नयाँ राजा ल्याइदियौं अब हाम्रो कर्तव्य पूरा भयो भन्ने उनीहरुको गलत सोच, अर्कोतिर, हामी सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भयौं अब क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने शासकको सोच।
यी दुई पोलको बीचमा नेपाली लोकतन्त्र एकपटक फेरि खतरामा पुग्दैछ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
नेपालका जनता राज्य र सरकारको काम कारबाहीमा पुरानै भावना छ।
रामायणमा एउटा प्रसंग आउँछः मञ्चलाले कैकयीलाई भनिन् रे, ‘तिम्रो छोरोलाई त यीनीहरुले भगाए, कौशल्याको छोरा पो राजा हुने भए त,’ कैकयीले ढाट्दै भनिन् रे, ‘के हामीबीच झगडा लगाउन खोजेको भनेपछि मञ्चला निस्किइन्।
कवि तुलसीदास भन्छन्ः ‘कोही विरूको होइ हमोका कहानी, हमरा होइ चेरी से रानी,’ जो राजा हुने हो उही राजा हुन्छ म त नोकर्नी नै हुने हो, राजा त होइन। यहि मनस्थितिमा आज जनता देखिन्छन्।
सडकमा उत्रिएर बलिदान दिने र दिन तयार हुने जनता अहिले कहाँ गए? सडकमा फ्याँकिएका लाखौँ चप्पल आज कहाँ पुगे? अब नयाँ व्यवस्था आएको छ हामी बसिबसि सबैथोक पाउछौं भन्ने भावना जनतामा छ। खानेपानीमा उही छ, विजुलीमा बल्लबल्ल कुलमानले सुधार गरे भन्ने भएको छ। अरू ठाउँमा स्थिति उही छ।
महंगाई उस्तै छ। तर, जनताले मानौं हामीले पाँच वर्षका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइदियौं अब सबै ठिक हुन्छ।
वर्षमा एक पटक नागको पनि पूजा हुन्छ। पाँच वर्षमा चुनावको बेला एक पटक पूजिएर, भोज खाएर मतदाता मस्त छन् र शासकहरू (प्रधानमन्त्री, मन्त्री) लाई यस्तो लागिरहेको छ कि सिंगो व्यवस्थाको परिवर्तन हाम्रै पुर्पुरोमा लेखिएको थियो। म प्रधानमन्त्री हुनु थियो र पो व्यवस्था बदलिएको हो भन्ने अनुभूति उनीहरुमा देखिन्छ। एकातिर शासक वर्ग आफ्नो पुर्पुरोले खाएको भन्ने धारणा राखेर मस्त छन् अर्कोतिर क्रान्ति लक्ष्यमा पुग्यो अब हाम्रो के काम भनि सोच्दैछन्।
यस किसिमको दोहोरो मापदण्डले गर्दा हरेक प्रजातान्त्रिक देशमा दुई चार वर्षमा फेरि तानाशाही व्यवस्थामा परिणत भएको छ।
कुनै समय ठूलो उत्साहले इन्डोनेशियामा परिवर्तन भएको थियो, वर्मामा भएको थियो दिगो रहेन।
हालैमात्र मध्यपूर्वमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन अहिले कहाँ हरायो? त्यसैले आन्दोलनको भोलिपल्ट शासकले आफ्नो कर्तव्य बुझेन र जनताले आफ्नो अधिकार बुझेन भने पुनः फेरि नेपालमा अध्याँरो दिन सुरु हुन सक्दछ।
जनताले बुझ्नु परेको छ आफ्नो अधिकार, शासकले बुझ्नु पर्‍यो आफ्नो कर्तव्य। त्यसपछि शासकका पनि अधिकार आउँछन् जनताका पनि केही कर्तव्य आउँछन्। तर, अहिले एकातिर कर्तव्य अर्कोतिर अधिकार विर्सिएर दोहोरो चापमा हाम्रो गणतन्त्रमाथि फेरि ग्रहण लाग्ने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ।
Prevपछिल्लोश्रीमतीलाई मेरो विरोध गर्ने अधिकार दिएको छु : प्रधानमन्त्री ओली
अघिल्लोलोकतन्त्र र संघीयताको विरुद्ध ओली गए राजालाई झैँ हटाइन्छः देउवाNext